EA013 - OMG Igwe Ọdụ Nleba Anya Mkpuchi Mkpa Ọkụ Ntinye Ntanaka -500 + ft Ope 2 [1 na 250] - $ XNUMX | Ngwọta OMG
EA013 - OMG Igwe Ọdụ Nlekọta Ahụike Mkpuchi Mbara Igwe Ọdụdọ -500 + ft Operating Range [2 na 1] - $ 250
Nhọrọ nhọrọ nchedo gụnyere 1. 2 + Ọda Ọkụ. Naanị 3 naanị. Naanị Nanị
Bright Agbanwuo ọkụ ọkụ zuru oke maka ndị nwere nkwarụ.
Nhazi usoro nke rue 500 + ft na-emeghe.
Egwu 32 / mkpu na-ada ka ịhọrọ (Nkọwa ụda 23 na nlọgharị Mberede 9), nchịkwa 3 dị mgbagwoju anya, na iji 16-bit gbanwee iji wepu nnyonye anya site na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Mfe iji usoro mkpu / anya oku abụọ kpọọ maka onye ọrịa na onye nlekọta - Nchekwa mkpuchi zuru oke maka ndị agadi ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ iji kpọọ maka enyemaka.
Nanị pịa ma ọ bụ ịkpọ bọtịnụ iji hụ onye na-elekọta ya site na onye ntanetịghị - Nweta usoro nke elu 500 ụkwụ na oghe.
Enwere ike ịchọta bọtịnụ oku dịka akwa, na-ebu n'akpa uwe, ma ọ bụ debe ya n'ụra.
Bọọ oku bụ mmiri na-eguzogide mmiri.
Onye na-elekọta onye na-elekọta ya nwere ike itinye mgbidi, tinye ya nso onye na-elekọta, ma ọ bụ buru na akpa.
Ịkpọ ngwaọrụ maka ụmụaka: Ndị nne na-achọ iji nnwere onwe nke ụmụ ha malite na nwata ga-ala azụ n'ihi na ọ dị ha mkpa ịpị bọtịnụ maka enyemaka.Nwepụta ngwaọrụ: Ọ bụ ngwaọrụ bara uru maka ezinụlọ na nne na nna na ụmụaka na-ehi ụra n'otu ụlọ. N'oge oyi, ndị nne na nna nwere ike ịpị bọtịnụ ahụ n'enweghị uwe na ịrị elu.
Na - agụnye ihe niile dị mkpa iji mee ihe ozugbo - Otu bọtịnụ oku, otu onye nata. Onye nata na transmitter na egosiputa batrị ala. Onye natara kwadoro site na 3 x batrị AAA (anaghị etinye ya); transmitter kwadoro site na 1 x CR2032 batrị (gụnyere).
Ịkpọ ngwaọrụ maka ndị ọrịa na ndị nwere nkwarụ: Ebe ọ bụ na onye na-elekọta onye na-elekọta anaghị enwe ike ịnọnyere ndị ọrịa ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ mgbe niile, ihe ị ga-eme mgbe ha chọrọ enyemaka karịsịa n'abalị? Ha nwere ike inweta oge na nchebara echiche n'emeghị mkpu site na ịpị bọtịnụ ahụ.
Ịkpọ ngwaọrụ maka ụmụaka: Ndị nne na-achọ igosipụta onwe ha nke ụmụ ha site na nwata ga-ala azụ n'ihi na ọ dị ha mkpa ịpị bọtịnụ maka enyemaka.
Ịkwapụta ngwaọrụ: Ọ bụ ọrụ bara uru dị na ya maka ezinụlọ na nne na nna na ụmụaka na-ehi ụra n'otu ụlọ. N'oge oyi, ndị nne na nna nwere ike ịpị bọtịnụ ahụ n'enweghị uwe na ịrị elu.
Na-elekọta ngwaọrụ maka ndị inyom dị ime ma ọ bụ ụmụ nwanyị n'oge ọnwa nke ịnọ n'ụlọ mkpọrọ mgbe ha mụsịrị nwa: Ndị inyom ma ọ bụ ụmụ nwanyị dị ime n'ọnwa nke mkpechi mgbe ha mụsịrị nwa chọrọ nlekọta nchebara echiche anyị. Kedu ihe anyị ga-eme mgbe nwa-nwanyi. njide onwe-nwanyị ma ọ bụ ndị òtù ezinụlọ nwere ike ịnọnyere ha mgbe niile? Naanị site na ịpị bọtịnụ ahụ nwere ike ime ihe ha chọrọ.
Melody na-ada maka nhọrọ: Ụdaolu 23 na ntụrụndụ mberede 9.
Ụdị nhọrọ arụ ọrụ: mkpu naanị; naanị ìhè; ọkụ na mkpu
Ihe ngosi batrị ala: Echetara ma batrị dị ala.
3 larịị nhazi ike olu: Ị nwere ike idozi ya site na mkpa gị.
Dị mfe iji: Mfe iji usoro mkpu / anya oku abụọ maka oku na onye nlekọta - Nchekwa egwu mberede maka ndị agadi ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ iji rịọ enyemaka - Nanị pịa ma ọ bụ ịkpọ bọtịnụ iji kpọtụrụ onye na-elekọta site na onye na-enweta ikuku - Ntanetị nke elu ruo 500 ụkwụ ebe.
Ọrụ nrubeisi nke ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi: N'iji 16-bit encoding, na-ezere nnyonye anya n'etiti ndị agbata obi.
Onye nnata na transmitter niile nwere ncheta dị ala: Iji zere ike ọ bụla ma ndị mmadụ enweghị ike ịnweta enyemaka n'oge oge.
Ihe ngosi pụrụ iche: Ntube mmiri na mwube ọdịda, iji zere ndị mmadụ apụghị inweta enyemaka mgbe ha dara ma ọ bụ ihe mberede ọzọ.
Pịa onye natara "Ogwe aka" ruo mgbe ìhè ọkụ na-agbanye
Pịa bọtịnụ oku uhie ozugbo ị ga - ejikọta ya na onye natara (jide n'aka na ị ga - ewepụ bọtịnụ nchedo batrị site na ịpị bọtịnụ oku na onye nlezianya gụnyere)
Uhie ọkụ ga-agbanye iji gosi na ọ ga-eme nke ọma
Onye natara ga-apụ na-akpaghị aka na ya
Usoro dị njikere iji. Tinyegharịa usoro ma ọ bụrụ na bọtịnụ oku na onye na-anata hapụ njikọ
Onye na-enweta Remote x 2
Igodo oku x 1
Nzuzo 9448 13 Echiche Taa
OMG Handicap / Okenye Ulo ikuku enweghi nsogbu…
IC002- OMG Wireless Intercom Sistem - Home & Office…